Kidnapping: lasan’ny jiolahy indray tao anatin’ny efatra andro ny Karana | NewsMada
Kidnapping: lasan’ny jiolahy indray tao anatin’ny efatra andro ny Karana
Ny eo, tsy votsotra; ny hafa, nalain’ny jiolahy an-keriny indray. Karana roa tompona orinasa lehibe eto an-dRenivohitra izany izao ny any am-pelatanan’ny jiolahy tao anatin’ny herinandro monja…
Tao anatin’ny efatra andro monja, nisy naka an-keriny teto an-dRenivohitra ny teratany karana roa. Vao afakomaly alina, nisy naka an-keriny teny Androhibe i Nassir Sivjee, tale jeneralin’ny Conforama Akoor. Teny an-dalana hody izy io ary nisy nanakana ny fiara nentiny ka naka azy tamin’izany ny jiolahy maro nirongo basy. Efatra andro teo ho eo talohan’izao, nisy naka an-keriny ihany koa i Riaz Hassime, tale jeneralin’ny orinasa Makiplast. Nisy naka an-keriny teny Ambatobe izy io. Efa hita teny akaikin’ny Akamasoa ny fiarany.
Mbola tsy nisy hita ireo Karana ireo hatramin’izao. Tao anatin’ny herinandro monja, nataon’ny jiolahy lasibatra ny Karana roa tompona orinasa lehibe eto an-dRenivohitra.
Manao antso avy ny CFOIM na ny fikambanan’ny teratany karana mizaka zom-pirenena frantsay eto Madagasikara ny amin’ny hanomezana vaovao azy ireo manodidina ny fakana an-keriny ireo olona ireo. Nambaran’izy ireo fa mahazo valisoa lehibe izay afaka manome vaovao, toy ny fanoroana ny toerana itazonana ilay Karana, ny fiara nampiasaina, ny momba ireo jiolahy.
Sarotra ny fahitana ireo jiolahy
Anisan’ny mampanano sarotra amin’ity “Raharaha kidnapping” ity ny tsy fahampian’ny vaovao eny anivon’ny mpitandro filaminana. Milaza hatrany ireto farany fa tsy manome vaovao ny fianakaviana. Manao antso amin’ny mpitondra sy ny mpitandro filaminana anefa ny CFOIM handray andraikitra. Raharaha sarotra satria azo heverina fa misy koa ny firaisana tsikombakomba amin’ny raharaha toy itony. Mety misy mpitandro filaminana sy ireo efa nigadra noho ny fakana an-keriny kanefa tafavoaka. Andrasana indray izay tohin’ity kidnapping ity.